Yurub oo ka shireysa faafida Ebola - Cakaara News
Luxembourg(CN) Isniin Oct 20,2014.Wasiiradda arrimaha dibada ee Dalalka Yurub ayaa maanta ka shiraya sidii ay xoojin lahaayeen jawaabtooda ku aaddan ka hortaga faafida cudurka Ebola. Dad ay tiradooda ka badan tahay 4,500 oo qof ayaa u dhintay cudurka, waxaana badankood ay ku dhinteen galbeedka Afrika, walow ay jireen dhowr qof oo cudurka ugu dhintay Yurub iyo Mareykanka. Iyada oo ay sii kordheyso tirada dadka uu cudurka ku dhacayo, ayaa waxa uu Ebola hadda noqday dhibaatada ugu weyn ee soo wajahday wasiiradda arrimaha dibada ee dalalka Yurub.
Waxa ay maanta kulan ku leeyihiin caasimada Luxembourg, iyaga oo dareensan baahida loo qabo in si degdeg ah cudurka loogu xakameeyo Galbeedka Afrika, si aanu ugu faafin dunida inteeda kale. Guud ahaan dalalka Yurub ayaa ku bixiyay dadaalada lagu xakameynayo cudurka lacag ka badan 400 milyan oo pound.
Ra’iisul wasaaraha UK, David Cameron ayaa doonaya in lacagtaasi la laba-laabo. Lacagtaasi ayaa ka caawin doonta dalalka Liberia, Sierra Leone iyo Guinea in ay xoojiyaan daryeelkooda caafimaadka, ayna ka gaashaantaan dhibaatada uu cudurka Ebola ku keeni karo dhaqalaahooda.
Balse waxaa sii xoogeysanaya fikirka ah in loo baahan yahay hawlwadeeno caafimaad iyo ciidamo loo diro Galbeedka Afrika, isla markaa gobolkaasi laga dhiso cisbitaalo qalabeysan si cudurka loola dagaallamo. Ujeedka ayaa ah in la go’doomiyo cudur sidaha, balse aan xiriirka loo jarin dalalka uu saameeyay.